"Ifilimu engcono kakhulu-2" izokhishwa ngoJanuwari 2009
U-Oleg Fomin, odubule amateyipu anjenge "Gentlemen Officers: Save the Emperor" no "Usuku Lokukhethwa", eseqedile ukudubula ukuqhubeka komdlalo we "Movie Best".
Ingxenye yokuqala yefilimu, ekhishwe ngoJanuwari 2008, yamukelwa yibo bobubili ababukeli kanye nabagxeka kunalokho. I-cinematography yaqala ngempumelelo ebhokisini lebhokisi futhi ekugcineni ithatha indawo yesine phakathi kwamafilimu amakhulu kakhulu anamuhla, iqoqa amaRandi ayizigidi ezingu-30. Nokho, maduzane "Ifilimu Ehamba phambili" yabeka enye irekhodi - ngokusho kwenombolo yezibuyekezo ezingalungile zabahlaziyi befilimu abathwala i-tape ngokoqobo kumanini.
Nokho, ukugxeka akuzange kubesabe abadali befilimu, okuhloselwe ukuqhubeka. Kungenzeka ukuthi, "I-movie engcono kakhulu-2" izovela kumabhayisikobho ngoJanuwari 22, 2009. Ku-tape entsha, abalobi beskriphthi abakhethwe njengamafilimu athile ethi "Ukushisa", "I-Irony of Fate. Ukuqhubeka "," 12 "," Sivela esikhathini esizayo ", i-TV show" I-King of the Ring "," iMalakhov + "," Dom-2 "nabanye abaningi.
Imisebenzi efilimu yenziwa yizo zonke izinhlamvu ezijwayele ukuhlaziywa - Garik Kharlamov, Timur Batrutdinov, uDmitry Khrustalev, Oleg Vereshchagin, Mikhail Galustyan, uDmitry Nagiyev, Alexander Bashirov, uSergey Lazarev, uSergey Zverev nabanye.
Iholide elifanele labadala
Ukudlala kanjani umngane ocingweni ngo-Ephreli 1
3 puzzle on ukucabanga okungezona standard, okuyinto abantu ne IQ ukuxazulula ngaphezu 120. Futhi ungakwazi?
Ukunakekelwa kwe-Seam ngemuva kokulethwa
Imithetho Eyisisekelo Yokudla Okuhlukile
Izinkukhu izinkukhu kule multivark
U-Anastasia Volochkova waya ukuyofuna umkhwenyana ukuthi "Ake sitshele"
Yini ongayidla kwasekuseni? Izindlela zokupheka zokudla okunomsoco okunempilo
Indlela yokukhetha eyunivesithi efanele
Ingulube yengulube nge-plum sauce
Ukugcina izingane ezingeni eliphansi lezikole
Iresiphi elula: ithanga isobho elinotamatisi
Ukuzivocavoca okuphefumulayo kwezingane